Kushomeka kwechip kunogara kusvika pakati-2022 Ndinobva mac
Isu tanga tichitokuudza kuti makambani anotarisira kugadzira machipisi vane matambudziko ekupaNaizvozvo, pane kunonoka kugadzirwa kwemachipisi uye nekudaro makambani anoada iwo ave kutanga kunetseka nezvekushaya zviwanikwa zvekushandisa kwavo. Mitengo ichakwira munguva pfupi.
Pese patanga tichikuzivisa nezvekushomeka kwemachipisi, mumwe wemhedzisiro inogona kuitika kukwira kwemitengo yezvigadzirwa zvehunyanzvi, semuenzaniso maMac.Sezvo vasina kugona kuisa machipisi aya, haakwanise kuvhurwa musika mamodheru matsva so nguva yekuendesa ichave yakakura uye mitengo ichatokwira sezvo makambani achange aine fungidziro shoma yekutengesa.
Aya ndiwo mamiriro ehutachiona hwezvigadzirwa zvetekinoroji. Utachiona haugone kudzora kugona kwavo kugadzira kana kushanda, asi kushomeka kwezvinhu ndizvo zvinogona kuvadzora. Makambani anotarisira kugadzira machipisi aya anoyambira kuti kushaikwa kwawo kunogona kufungidzirwa iyo inogara kusvika pakati pa2022.
Kushomeka kwepasi rose kwemachipisi kuri kukonzera kuvharwa kwezvirimwa zvemotokari uye kuongororwazve kwezvirongwa zvekuburitsa nevagadziri vema smartphone. GlobalFoundries, nyika yechitatu-hukuru chip chipikisi, yakati yakaronga kuisa mari $ 1.400 bhiriyoni yekuwedzera huwandu hwekugadzira mukuyedza kugadzirisa dambudziko rinogara kusvika muna 2022.
Pane zviratidzo kuti Apple inogona kunge isiri kuona yakaipisisa yekushomeka. Muchokwadi, vamwe vaongorori vanodavira kuti kukanganisa kwemamiriro ezvinhu aya kunogona kubatsira apuro, asi munguva pfupi inotevera vanozobvuma kushomeka. Kunyangwe isu tiri pachena kuti makambani ese ane mamwe akachengetedzwa emachipisi aya, anozopera kana paine kudiwa kwakasimba.
Idambudziko repasirese uye nekuda kwechikonzero ichocho, Mutungamiri Joe Biden pachake akataura kuedza kusimudzira yekuAmerican semiconductor kugadzira uye kusimbisa iyo yepasi rese cheni cheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo chip yekushomeka ichagara zvirinani kusvika pakati-2022.
Pakave pasina hurukuro naTesla uye zvinoita sekunge pasina.